ULouisa May Alcott. Amabali amaninzi ngakumbi kunabafazi abancinci | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi zoLutsha, Inoveli
ULouisa May Alcott usweleke ngemini efana nale yanamhlanje ukususela ngo-1888 ukuya phambili EBoston, kwiintsuku ezimbini emva kokusweleka kukayise. Lo mbhali waseMelika lelinye lamagama amakhulu egama Uncwadi lolutsha maxesha onke. Inoveli yakhe eyaziwa kakhulu kwihlabathi liphela yile Abafazi abancinci, Kodwa imveliso yakhe yayinkulu kakhulu kwaye wayedlala nezinye iintlobo. Zezi amanye amabali amaninzi Ikwabhale nayo, nangona begqunywe ziziganeko zikaJo Matshi kunye noodadewabo.
1 Louisa Meyi Alcott
2 Intombazana endala
3 Emva kwemaski
4 Ngaphantsi kwe-lilacs
5 Amadoda amancinci
6 Abazala abasibhozo
7 Mermaids encinci
8 Ibali lomongikazi
Louisa Meyi Alcott
Utata wakhe wahlikihla amagxa nabahlobo abanjengaye URalph Waldo Emerson noHenry David Thoreau, ke uLouisa ngewayengazange abe nezalathiso ezingcono zoncwadi macala onke. Kodwa usapho lwakhe aluhlali buninzi kwaye kwafuneka asebenze kulo imisebenzi eyahlukeneyo ukusukela emncinci kakhulu de aqale ukuhlala kule nto ayibhalileyo.
Kwaye wayenza kumacala amabini ahlukeneyo endalo: enye yayijolise kuyo iintombi kwaye yaqaqambisa amaxabiso emveli, njengoko kusenzeka kwi- Abafazi abancinci o Amakhwenkwe kaJo; kwaye omnye, umntu omdala ngakumbi, waquka uthotho lweenoveli uhlobo lothando ukuba wapapasha kunye naye Isibizo se-Barnhard, Ukongeza umsebenzi onzima kubantu abadala ababiziweyo Mephistopheles mihla (1875).
Kwakukuhle kakhulu umkhuseli wamalungelo abasetyhini kwaye nasekupheleni kobomi bakhe waba nguye utshitshisi. Ezi ziinoveli zakhe ezisixhenxe:
UPolly Milton, intombazana intsimi iminyaka elishumi nane, uya esixekweni ukuya kuchitha ixesha elithile nomhlobo wakhe UFanny shaw. Apho uPolly uchukumisekile yindlela ohluke ngayo kubomi bukaFanny kobakhe, kuba uFanny uhlala enefashoni kwaye uthanda ukudlala ngothando nabantu abancinci. UPolly uza kudibana nabantu abakwiminyaka yakhe, aye kwimidlalo yeqonga ngokuhlwa, kwaye abuyele ekhaya ecinga njalo Ubomi esixekweni bumnandi, kodwa ayisiyiyo yonke into.
Kwiminyaka emithandathu kamva uPolly Buyela esixekweni Ukuhlala endlwini ka UNksk Mills njengomfundisi-ntsapho womculo. Ke, Tom, UmntakwaboFanny uyabandakanyeka kunye nentombazana encinci engathandaniyo nenamabhongo. UFanny uthanda umfana ogama lingu Sydney, onomdla kuPolly, kodwa Uthanda bani ngokwenene uPolly?
SiseNgilani ngo-1866. Abancinci kunye ne-demure UJean muir ifika kwindlu ephezulu ye Coventry ukusebenza njenge umphathi. Enkosi kubuchule bakhe bobuqili kunye nezakhono ezininzi, emva kosuku nje olunye lomsebenzi ikwazile ukuzuza uthando de la UNksk Coventry, intombi yakhe UBella, unyana omncinci, Edward, kwaye mhlekazi John, umalume omdala osisityebi.
Kodwa ayisiyiyo imeko ngoGeraldumkhuluwa, noLucia, umzala wakheNgubani Abamthembi umphathi kwaye baqala ukuhlola amanyathelo abo. Nangona kunjalo, Injongo kaJean kukufumana indoda esisityebi nesisityebi, kwaye akazukuthandabuza ukusebenzisa zonke izixhobo zabasetyhini azisebenzisayo njengeemaski zokuzimela ngasemva ukufezekisa oku.
Inoveli yolutsha apho kubaliswa khona izinto zomntwana UBen brown xa, xa usuka kude kwi isekisi apho wayesebenza khona Sancho, inja yakho uqeqeshiwe, udibane nabanye oodade abancinci abadlala phantsi kwe-lilacs. UBen uza kusebenza njengomqeqeshi kwaye kuya kwenziwa umhlobo walaphanjengoko enethemba lokuba utata wakhe uza kubuya eze kuye. Ngelixa uhlala zonke iintlobo zokuzonwabisa.
Le yile ulandelelwano ukuya Abafazi abancinci osixelelayo ukuba kwenzeka ntoni xa UJo Baher, ongatshatanga ngoMatshi, kunye nomyeni wakhe bavula ikhaya lokufundisa nokukhathalela amakhwenkwe amancinci. Eli liqela lamakhwenkwe athe kratya kodwa anentliziyo entle enefuthe elihle kubomi bosapho lonke lakwaBaher, kubandakanya nabantwana babo abancinci.
Ke sinayo UFranzIndoda eneminyaka eli-17 ubudala yaseJamani, Emil, ebizwa ngokuba yi "Commodore" ngokuthanda kwakhe ukuqhuba ulwandle, UMbindi-Brooke, ulumkile kwaye wonwabile, Rob, ungonwabi, Dick, Umva wokubuyela emva, IDollyothintithayo, onobuqhetseba nokubawa Jack, Ned UBarullo BakerUkuhlukumeza nokungakhathali, Georgeii-zampabollos, uBilly, abamsulwa, Tommy, onobundlobongela, odlakadlaka nozayo Nat, oya kuthi kamva ajoyine izinto ezinzima nezingafumanekiyo Dan. Bonke bahlala ePlumfield School kwaye uJo uya kubakhathalela ukubenza amadoda enzuzo.
Le yenye ye iinoveli ezininzi ezaziwayo Alcott kwaye yaziwa njenge IJuventud. Eli libali lomfazi omncinci URosa Campbell, obuyela ekhaya emva kohambo lweminyaka emibini ejikeleza umhlaba kunye nomalume wakhe uAlec kunye nesicakakazi sakhe uPhebe. Kodwa ekubuyeni kwakhe ufumanisa ukuba kunjalo umnini-mali eninzi.
Ngesiquphe uzibona engqongwe ngu Inani elikhulu labalandeli kunye nabaphetheyo. URosa kuya kufuneka athathe isigqibo liza kuba yintoni ikamva lakho kwaye ukhethe ukuba yeyiphi kubahlobo bakhe nakubazala abanomdla ngakumbi kuye hayi kwithamsanqa lakhe.
Yiyo Ukukhethwa kwamabali amnandi Apho uAlcott usibonisa khona ukuba naye wayenguvulindlela kunye nombhali omkhulu weentsomi kunye neegoth. Kwezi ziphambili amatsha, amathumbu kunye nereids kunye nezinye izidalwa zolwandle. Umzekelo, sinamabali anje ariel, URizo, inimba yolwandlet Umhlobo omncinci kaFancy.
Phantse zonke izinto zokwabelana kwindawo efanayo ne Isiqithi, indlu yokukhanya, ihotele okanye iivillas zolwandle, mhlawumbi iphefumlelwe Ukungafaneleki, apho uAlcott waya eholideyini kunxweme lwaseNew England.
Eli bali liyabaliswa UKate Snow, umongikazi (njengombhali ngokwakhe) oqeshwe ukuba anyamekele Elinor, intombi encinci ye Intsapho yakwaCarruth, onesifo sengqondo esingaqhelekanga. Ukususela kumzuzu wokuqala uKate uya kuzama ukuqonda ukuba kutheni lo mfana URobert Steele, uthathwa njengomhlobo wosapho, ugcina a ulawulo olupheleleyo ngakumbi kwenzeka ntoni kwindlu kaCarruth.
Yiyo I-labyrinth eyiyo yenkohliso, iimfihlakalo kunye neenkanuko onayo isiphelo esimangalisayo. Singathi yinoveli ngo ubuqhetseba obunobuzaza kwisiqalekiso sohlanga kwaye ukhumbuza kakhulu ithoni kunye nemvelaphi kaWilkie Collins, oodade baseBrontë okanye uJane Austen.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » ULouisa May Alcott. Amabali amaninzi ngakumbi kunabafazi abancinci